Wararka Xanta Suuqa Kala Iisbiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Maanta: Upamecano, Caleta-Car, Marcelo, Williams, Hakimi, Barkley
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Upamecano, Caleta-Car, Marcelo, Williams, Hakimi, Barkley
February 2, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Madaxa fulinta ee kooxda Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa sheegay in Liverpool iyo Chelsea ay yihiin labada koox ee Premier League ee kula tartamaya saxiixiisa xagaaga saxiixa daafaca reer France ee RB Leipzig Dayot Upamecano, oo 22 jir ah (Mirror)
Liverpool ayaa dalab 23 milyan euro (20 milyan oo ginni ah) ka gudbisay daafaca dhexe ee reer Croatia Duje Caleta-Car, 24, waxaa diiday Marseille. (RMC Sport)
Liverpool ayaa seegtay soo xerogalinta daafaca dambeedka dhexe ee kooxda Lyon Marcelo ka dib markii kooxda reer France dhibaatooyin dhaawac ka soo gaaray ay ka dhigtay inay go’aansadaan inay u ogolaadaan ciyaaryahanka reer Brazil, 33, inuu baxo. (thsun)
Liverpool ayaa diiday isku day dambe oo Southampton ay ku dooneysay inay amaah kula wareegto daafaca reer Wales Neco Williams, oo 19 jir ah. (Sky Sports)
Manchester City ayaan xiiseyneynin saxiixa ciyaaryahanka reer Spain Diego Costa si xor ah inkastoo ay jiraan warar la xiriirinaya 32 jirkii hore ee Chelsea . (Dailymail)
Manchester City ayaa ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa daafaca heerka caalami ee reer Morocco ee kooxda Inter Milan Achraf Hakimi iyadoo 22 jirkaan lagu qiimeeyo 35 milyan ginni ay hore u dooneysay kooxaha Arsenal iyo Chelsea . (Calciomercato)
Aston Villa iyo Chelsea ayaan wali wadahadalo ku aadan heshiiska joogtada ah ee qadka dhexe reer England Ross Barkley, 27, kula yeelan doonin kooxda Midlands iyadoo dhamaan dhinacyada ay ku faraxsan yihiin inay qiimeeyaan xaalada dhamaadka xilli ciyaareedkaan. (BirminghamMail)
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane waa inuu ku guuleysto Champions League si loo hubiyo inuu ilaashan doono shaqadiisa. (AS)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Scotland Billy Gilmour, oo 19 jir ah, ayaa ka sii mid ahaan doona kooxda Thomas Tuchel kooxda Chelsea qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkaan ka dib markii uu uu soo jiitay tababaraha cusub. (Standard)
Manchester United ayaan ka fiirsan inay la soo saxiixato xiddiga reer Bosnia-Herzegovina ee kooxda Roma Edin Dzeko, oo 34 jir ah weeraryahankii hore ee Manchester City intii lagu jiray suuqa kala iibsiga bishii Janaayo, in kasta oo ay soo jeediyeen warbaahinta Talyaaniga. (Express)
Manchester United ayaa meesha ka saartay xiisaha kooxaha Southampton, Newcastle iyo West Ham kuwaas oo dhamaantood doonayay inay amaah ku qaataan Brandon Williams, iyagoo doorbiday inay 20 jirkaan reer England ku sii hayaan Old Trafford. (Thsun)
Manchester City kalsooni dheeraad ah oo ay ka qabtay xulashooda daafaca dhexe ayaa keentay in Taylor Harwood-Bellis, oo 19 jir ah inuu amaah ugu biiro Blackburn . (Manchester Evening News)
17 jirka qadka dhexe ee kooxda Aston Villa Carney Chukwuemeka waxaa isha ku haya kooxaha Manchester United iyo Liverpool. (Times)